Blocky ပဟေဠိ | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » ပျော်စရာ & ဂိမ်းများ » Blocky
Blocky APK ကို
Blocky တစ်စူပါပျော်စရာ & စိန်ခေါ်မှုပိတ်ပင်တားဆီးမှု-ပွဲစဉ်ပဟေဠိဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ သင်အလွယ်တကူအဆင့်ဆင့်တို့ကိုရှောက်သွားဖို့ပဟေဠိဘုတ်အဖွဲ့ပေါ်မှာရှိသမျှလုပ်ကွက် drag and ကိုက်ညီဖို့သင်ယူနိုင်ပါတယ်။ စက်ရုပ်များကဲ့သို့ပိုပြီးစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ပုံစံများနှင့်အတူမြင့်မားသောသငျသညျအရအဆင့်ဆင့်သောကြောင့်သင် "အတွေ့အကြုံမရှိသေးသော" နှင့် "ပုံမှန်" အဆင့်ဆင့်လွန် be.When မည်ကိုပိုပြီးစိတ်လှုပ်ရှားစရာ, သင် "အဆင့်မြင့်", "တဲ့ Expert" ရောက်ရှိဖို့ပါလိမ့်မယ်နှင့် "မဟာ" အဆင့်ဆင့်, စသည်တို့ကိုသံခမောက်လုံး, ပိရမစ်, အတန်း, မြင်းနှင့်ဒိုင်နိုဆော,
ဒါဟာတစ်ဦးချင်းစီအဆင့်များအတွက်မှန်ကန်သောဖြေရှင်းချက်ကိုက်ညီရန်သင့်စိတ်ကူးစိတ်သန်းများနှင့်ယုတ္တိစဉ်းစားတွေးခေါ်ကျွမ်းကျင်မှုနှစ်ခုစလုံးလိုအပ်ပါတယ်။ ထိုသို့သင့်ရဲ့အငယ်လေးတွေဟာသူတို့ရဲ့ဦးနှောက်ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်နှင့်အချို့သောအရေးကြီးသောပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်တဲ့စွမ်းရည်သင်ယူဖို့အထူးသဖြင့်အဘို့, သင့်စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုအတွက်အကောင်းဆုံးဦးနှောက်ကြော်ငြာတိုဖြစ်ရမည်။
- သင်ဖမ်းရသည့်အခါအကူအညီအတွက် "အရိပ်အမြွက်" Get
•ရင်သပ်ရှုမောဖွယ် Games အတွေ့အကြုံ
- ရောင်စုံလုပ်ကွက်နှင့်အတူတောက်ပနှင့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်း interfaces
- Soothing Animation နဲ့အကြီးအဂရပ်ဖစ်
•လွယ်ကူ & FUN Block ပဟေဠိ
• UNIQUE စိန်ခေါ်မှုများရာပေါင်းများစွာ
- အချိန်မရွေး & ဘယ်နေရာမှာမဆိုသူကခံစားကြည့်ပါ
သငျသညျ Blackie play သောအခါ, ကျိန်းသေသင်သည်သင်၏ဦးနှောက်လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုပေါ့ပေါ့တို့နှင့်ကြီးသောအချိန်ကိုရောက်စေမည်! ဒါ့အပြင်, သင်သည်သင်၏ကလေးတွေကိုသို့မဟုတ်အခြားမိသားစုဝင်များနှင့်အတူပြုလုပ်ဆော့ကစားနိုင်ပါတယ်။
အဘို့အ Blocky (ပိတ်ပင်တားဆီးမှု-ပွဲစဉ်ပဟေဠိဂိမ်း) Download အခမဲ့, ယခုရှိသမျှသောပိတ်ပင်တားဆီးမှုပဟေဠိဖြေရှင်းနိုင်မှဘုတ်အဖွဲ့အပေါ်ပုံသဏ္ဍာန်တက်ကိုက်ညီဖို့လုပ်ကွက်ရွှေ့!
20.45 ကို MB